Dowlada Mali Oo Shacisay Tirada Dhimashada Werarki Lagu Qaday Hotelka Radisson Blue’ – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaDowlada Mali Oo Shacisay Tirada Dhimashada Werarki Lagu Qaday Hotelka Radisson Blue’
Dabley hubeysan oo gudaha u galay hotelka Radisson Blue magaalada Bomako Dalka Mali ayaa la sheegay in ay dileen 27 ruux kadib markii ay afduubteen illaa iyo 170 ruux oo hotelka degenaa.
Rasaas xoog leh ayaa weli laga maqlayaan dabaqa toddobaad ee hotelka oo leh 190 qol, waxaana loo malaynayaa in ay ku jiraan illaa toban dagaalyahano hubeysan ah iyagoo raadinaya dad is qariyay oo ka mid ah dadkii hotelka degenaa amaba shaqaalaha ka ahaa.
Ugu yaraan labo ka mid ah kooxihii hubeysnaa ayaa la dilay iyadoo dadkii ay afduubteen dhammaantood laga soo saaray hotelka, inkastoo weli howlgalo ay ka socdaan gudaha hotelka.
Illaa iyo hadda dadka laga aqoonsaday in ay ku dhinteen hotelkan ku yaal magaalada Bomako ee xarunta dalka Mali ayaa waxaa ka mid ah diblumaasi u dhashay dalka Belgian Geoffrey Dieudonne iyo qof u dhashay dalka Faransiiska, waxana laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay intaa ka sii kororto.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in 22 Maraykan ah oo hotelka ku sugneyd xilligii ay dableydu galeen la soo badbaadiyay. Dadka la helay meydadkooda ayaan weli la ogeyn wadamada ay ka soo jeedaan iyadoo 12 meyd laga helay hotelka qeybtiisa hoose halka 15 meydna laga soo saaray dabaqa labaad ee hotelka.
Urur taabacsan Alqaacida Al-Mourabitoun oo saldhigyo ku leh waqoyiga Mali ayaa sheegtay mas’uuliyada weerarkan. Mali ayaa waxaa ay la dagaalamaysay sanadihii la soo dhaafay kooxo Islaamiyiin ah oo badankood ka jira Waqoyiga dalka.
Ciidamo gaar ah oo Faransiis ah ayaa caawinayay ciidamada Mali dagaalada ay kula jireen kooxaha Ansar ad-Dini oo taageersan Alqaacida iyo mucaaradka Tuareg.
Bishii August ee sanadkan ayaa koox taabacsan Alqaacida waxa ay haysteen muddo 24 saacadood ah hotel ku yaal bartamaha dalka Mali magaalada Sevare. Afar askari,shan shaqaalaha Qaramada Midoobay ah iyo afar ruux oo ka dambeeysay weerarkan ayaa ku dhimatay.
ila iyo hatan wali waa socda howlgalka Dalka Mali.